I-6 yezona Dock zidumileyo zoBuntu kunye neziphumo | Ubunlog
Ukusetyenziswa iDock kwinkqubo yethu ihlala iphucula indlela esinokuqhuba ngayo usetyenziso lwethu ukubala kunye neendlela ezimfutshane kubo ngendlela ekhawulezayo ngaphandle koku zinokudityaniswa ngendlela ebalaseleyo kwimeko-bume yedesktop yethu.
Ngale ndlela singazilungelelanisa kwaye sinike idesktop yethu inkangeleko entle ngoncedo lwezi. Kule nqaku siza kubelana ngeeDock ezidumileyo esinokuzifumana kwinkqubo yethu.
Masiqale ngenye yezona zaziwayo.
1 ICairo Dock
3 Ifestile yokuKhangela kwiWindows
5 Iphaneli yeGnome
Le nqanawa ibonelela ngendlela yokulayisha usetyenziso kusetyenziswa iipaneli kunye neziqalisi emazantsi esikrini.
Itheyiphu kubandakanya imenyu kunye nenani lezinye iimpawu ezifanelekileyonjengokukwazi ukunxibelelana neenethiwekhi ngaphandle kwamacingo kunye nokudlala iingoma zomsindo.
Idokodo linokuqhotyoshelwa phezulu, ezantsi nakweliphi icala lesikrini kwaye unokwenziwa ngokwezifiso ukuthanda kwakho.
Ukufakela kwabo kufuneka bavule i-terminal kwaye benze:
Iplock dock yile Umsunguli wesicelo esindiweyo kuba ayifuni mali ininzi. Ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso iipaneli zokuseta, phakathi kweempawu zayo esinokuzifumana:
Ukwenza ngokwezifiso indlela yokuziphatha kwepaneli.
Guqula umxholo wepaneli.
Yongeza imixholo emitsha.
Ukupheliswa kwezihloko ezingathandekiyo.
Iiqela zokusebenza kumahlelo
Ukuyifaka kufuneka sichwetheze:
Ifestile yokuKhangela kwiWindows
Ifestile eyiNavigator eyiFanelekileyo idoksi emazantsi edesktop yakho evula usetyenziso, iqulethe ii-applet, isebenza njengoluhlu lwefestile, kunye nokunye okuninzi. Iluncedo Kulula ukuyifaka, isebenzisa izixhobo ezimbalwa kwaye kulula ukuyilawula. Inenkxaso yabaqalisi, uluhlu lokwenza, kunye nosetyenziso lomntu wesithathu.
Ukuyifaka kwinkqubo yakho kufuneka uchwetheze:
Docky sisiqalisi esivela kwi-Gnome Do evumela ukuba uququzelele ezona zicelo zisetyenzisiweyo ku-Ubuntu ngendlela eyahlukileyo. Inezongezelelo ezahlukeneyo ezibizwa ngokuba ziidokethi kunye nabancedisi ikuvumela ukuba unxibelelane nezicelo ezinje I-Tomboy, iRhythmbox, i-Liferea okanye i-Transmission, okanye imisebenzi efana nokujonga ixesha, ukujonga ukusetyenziswa kwe-CPU kunye nokuphononongwa kolunye ulwazi olunomdla kwinkqubo yethu.
Ukuyifaka kwinkqubo yethu kufuneka sichwetheze:
Este licandelo eliyinxalenye yeGnomeFlashback kwaye ibonelela ngeepaneli ezingagqibekanga kunye neapplet zemeko yendawo yedesktop yeGnome.
Iiphaneli zisetyenziselwa ukongeza ii-applet, ezinje ngebar yemenyu ukuvula usetyenziso, iwotshi, kunye nesalathi seeapplet Banikezela ngokufikelela kuqwalaselo lwenkqubo, njengenethiwekhi, isandi, okanye ubeko lwebhodi yezitshixo yangoku. Kwiphaneli esezantsi kuhlala kukho uluhlu lwezicelo ezivulekileyo.
Ukuze sikwazi ukuyifaka kwinkqubo yethu kufuneka sichwetheze kuphela:
Es ibar yomsebenzi engenobunzima kunye nokutshintshwa kwepaneli yeLinux esebenza njengendawo ezimeleyo emileyo. I-DockbarX eifolokhwe yedockbar Le dock izisa yonke into Windows 7 ibar yomsebenzi kwi-distro yethu esiyithandayo. Ibha yomsebenzi enikezelwa yiDockBarX isebenza ngokupheleleyo kwaye ikopi egqibeleleyo yeWindows 7 ibar yomsebenzi, Ukukopa ukujonga kuqala kwe-skrini ozivulileyo kwiseshoni.
Entre eyona misebenzi iphambili sinokuyifumana:
Fakela ii -apps kwibar yomsebenzi
Ukufikelela ngokukhawuleza kumaxwebhu akutshanje, ahlobene kunye nasetyenziswa kakhulu ngoncedo lweZeitgeist
Uluhlu olukhawulezayo lobumbano, iibheji, kunye nenkqubela phambili yemivalo yenkxaso
Ukujongwa kwe Window (kufuna iCompiz kunye ne-CCSM enikwe amandla iPlagi yokuhambelana ye-KDE) -Oku kuluncedo kwi-bugiz kunye nohlobo lweCompiz lwamva nje
Ukuyifaka sichwetheza nje:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-6 yezona dock zidumileyo ze-Ubuntu kunye neziphumo
Andikaze ndiqonde ukuba zeziphi izibonelelo zedokodo xa kuthelekiswa nebar yomsebenzi. Kwaye ngaphambi kokuba ndibe ngumsebenzisi weapile elunyiweyo.
IBraian FG287 sitsho
Ngaba indawo yokugqibela inokufakwa kwi-ubuntu 16.04? Andifumani nto kwi-intanethi
Phendula kwi-Braian FG287
USawule chavez sitsho
I-dockbarx repo iphantsi, kuye kwafuneka ndiyisuse .deb kuyo http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu/pool/main/d/dockbarx/dockbarx_0.92-1~webupd8~xenial4_all.deb
Phendula uSaul Chavez
Kufuneka ifakwe kwakhona
kwaye ifuna ukuxhomekeka okunzima ngakumbi
Enye yeenzuzo zokusebenzisa i-dock ngaphezulu kwebar yomsebenzi ukumilisela usetyenziso ngamathuba okubeka ngokwamaqela abaqalisi abakudidi olunye. Ke, kukho indawo kwibar encinci yezinye iiapplet, njl.
Ndiyibona ngokunyanisekileyo njengeyona nto intle kunokwenza Ndisebenzisa iCairo, kodwa ngenxa yokuba ndiyithanda kakhulu, ngaphandle kweemifanekiso zamaphephadonga e-3D zijongeka ngcono eDock. Ukuphumla, kuyafana.
Qalculate: Indawo yokubala enamandla nesimahla evulelekileyo